Qaar ka mid ah xildhibaannada ka soo jeeda degaanada Puntland ee ka tirsan Baarlamanka Federaalka ah ee Somaaliya ayaa maanta ka dhoofay Muqdisho, iyagoo gaaray magaalada Garoowe.
Xildhibaanadan oo gaaraya illaa lix xubnood, waxaa horkacayey Xildhibaan Xasan Abshir Faarax waxaana garoonka Garoowe ku soo dhoweeyey wasiiro iyo masuuliyiin ka tirsan Puntland.
Guriga madaxtooyada Puntland ayaa markii dambe loo gelbiyey, halkaasoo uu ku qaabilay si diirranna ugu soo dhoweeyey Madaxweynaha Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas.
Madaxweynaha oo si kooban warbaahinta ula hadlay, ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay soo laabashada xildhibaanada iyo weliba sida ay u aqbaleen baaqii horay loogu jeediyey ee ahaa inay Puntland dib ku laabtaan.
Xildhibaan Xasan Abshir Faarax oo ku hadlayey afka xildhibaannada ayaa isna sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin in iyagoo nabad qaba ay ku laabtaan degaanada ay kasoo jeedaan.
"Baaqii aad soo jeediseen Markii aanu maqalnay, Puntland dadka kaga jira in la yimaado waanu soo dhaqaaqnay runtii waxna ma aanan sugin Ilaahayna nabad buu nagu keenay, anaga iyo maamulka ayaa haatana kulamo noo socdaan” ayuu yiri Xasan Absh Faarax.
Maamulka Puntland ayaa shaaciyey in gebi ahaanba uu xiriirka u jaray dowladda Federaalka Soomaaliya maalmo ka hor ka dib markii magaalada Muqdisho lagu dhisay maamul goboleedka gobollada dhexe oo ka kooban Galguduud iyo Mudug..